Blog Reader: [စောလင်းနက်စ်]3New Entries: ကရင်အမျိုးသားများအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (အပိုင်း -၂-)
[စောလင်းနက်စ်]3New Entries: ကရင်အမျိုးသားများအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (အပိုင်း -၂-)
ကရင်အမျိုးသားများအကြောင်း သိမှတ်ဖွယ်ရာများ (အပိုင်း -၂-)
(က) AD4ရာစုမှ စတင်ရရှိသည်။ သထုံပြည်မနူဟာမင်းလက်ထက် ဗညားအိန္ဒဘွဲ့ခံ ကရင်အမျိုးသားပညာရှိ အမတ်ကြီး ဖူးဒိုက်ကော် (ခေါ်) မွန်ဒိန်းသည် ဗုဒ္ဓတရားတော် ပိဋကတ် သုံးပုံကို ကရင်ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
(ခ) ကော့သံခါရွာသား စောတာမိတ်သည် AD 1707၊ အသက် (၁၉)နှစ်အရွယ်တွင် သန်ကပိုင် ဆရာတော်ထံ၌ ရှင်သာမဏေပြုခဲ့သည် (ရှင်နန္ဒမာလာဘွဲ့) 1738 ခုနှစ်တွင် အင်းဝပဒုံမင်း (ဘိုးတော်ဘုရား) လက်ထက် မင်းဆရာတော် (မောင်းထောင်ဆရာတော်)ထံတွင် ရဟန်းခံသည်။ ရဟန်းဘွဲ့မှာ နန္ဒမာလာသဒ္ဒမ္မကောဝိဒရာဇာဓိရာဇာဂုရုဖြစ်သည်။ 1776 (အမေရိကန်တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း) ခုနှစ်တွင် မွေးရပ်မြေသို့ ပြန်ကြွလာခဲ့သည်။
(က) ကိုသာဖြူသည် 1828 ၊ မေလ (16) ရက်နေ့တွင် နှစ်ခြင်းခံသည်။ (စကောကရင်)
(ခ) ဖူးစံဖေါင်သည် 1837၊ ဇန်န၀ါရီလ (12)ရက်နေ့တွင် နှစ်ခြင်းခံသည်။ (ပိုးကရင်)
(က) ပထမဆုံး ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဒေါကလု (Karen National Association) ကို 1881 ခုနှစ် (အိန္ဒိယကွန်ဂရက်ပါတီထက် ၂-ခန့်စောသည်) တွင် ဖွဲ့စည်းပြီး အမျိုးသားအရေးကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
(ခ) အထက်တန်းများ ကရင်စာပေနှင့် ပညာသင်ကြားရေး (1922) ခုနှစ်တွင် (ဘုရင်ခံဆာ ဟကုတ်ဘတ္တလာ) စဝှော်ကရင် (၁၀ တန်းအထိ) (ပ၀ိုကရင် ၇-တန်းအထိ) ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိခဲ့ကြသည်။ 1958 ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှစ၍ ယင်းခွင့်ပြုချက်ကို အကြောင်းတစုံ
(ဂ) ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့ကို တရားဝင် ရုံးပိတ်ရက်ဖြင့် ရရှိရန်ဆောင်ရွက်ရာတွင်
1937 ခုနှစ်၌ ဥပဒေကြောင်းမှတ် (26/1937) ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။1938 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၂)ရက် ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၆၇၈-ခုနှစ်၊ သလေး-ထိုင်ခုတ်ဖို၊ ပြာသိုလ္ဆန်း (၁)ရက် နေ့တွင် ပထမဆုံး ကရင်နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်းကို အသံလွင့်ပြောကြားခဲ့သည်။
၈။ 1931 ခုနှစ်၌ သတ်မှတ်ထားသော ကရင်မျိုးနွယ်စုများ
(၁) သီးခြားမဖေါ်ပြသောကရင် (၂) စကောကရင် (၃) ပကူးကရင် (၄) မိုဝေကရင် (၅)ဘွဲကရင် (၆) ပရင်းဘောကရင် (ရ)ဝေေ၀ါကရင် (ဂ) မိုပွာကရင် (၉) ပအိုကရင် (၁၀)ပဒေါင်ကရင် (၁၁) ကရင်ဖြူ (၁၂) ကရင်နီ (၁၃)ဂဲခို၈ဲဘားကရင် (၁၄) ဇယိမ်ကရင်(ပဒေါင်ခေါင်းကို) (၁၅) တလိုင်းကရင် (၁၆) ပိုးကရင်
(၁) ပိုးကရင် (မွန်ကရင်) (၂)စကောကရင် (၃)ဘွဲကရင် (၄)ပကူးကရင် (၅)ဘလပွာကရင်(၆)မော်နေပွါကရင် (၇)ကရင်ဖြူ (၈)ပလေခီး(ပလေချီး) (၉)ပိုးကရင်(အနောက်) (၁၀)မိုပွာကရင် (၁၁)ဃဲခိုကရင် (၁၂)ဃဲဘားကရင်
၁၀။ ကရင်အမျိုးသား လူဦးရောမှာ 1931 ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ (၁၀.၆) သန်းရှိနေစဉ်၊ ကရင်အမျိုးသားဦးရေမှာ (၁.၄) သန်း။ 1943 ခုနှစ် ဂျပန်ခေတ်သန်းခေါင်းစာရင်းအရ ကရင်လူဦးရေမှာ (၄)သန်းကျော်ခန့်ရှိပြီး၊ စစ်အစိုးရခေတ် 1992 ခုနှစ် စစ်အစိုးရသန်းခေါင်းစာရင်းအရ ကရင်အမျိုးသားဦးရေမှာ (၂.၆)သန်း (၂၆)သိန်းရှိကြောင်းသိရှိပါသည်။
၁၁။ 1951 ခုနှစ် သံလွင်ခရိုင်ကို အထူးဒေသအဖြစ်အခြေပြုလျှက် ကရင်ပြည်နယ်ကို ဖာပွန်၊ မြ၀တီ၊ လှိုင်းဘွဲ့ကော့ကရိတ်၊ သံတောင်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးစသည့် မြို့နယ်များကို ပါဝင်ဖွဲ့စည်းပြီး။ ကရင်ပြည်နယ်ထူထောင်ပေးခဲ့ရာတွင် 1992 ခုနှစ်သန်းခေါင်းစာရင်း
အရ ကရင်လူမျိုး (2.6)သန်း၊ (၂၆)သိန်းရှိသည့်အနက် ကရင်ပြည်နယ်တွင် (၆)သိန်းမျှနေထိုင်ကြ၍ ကရင်ပြည်နယ်ပြင်ပ အခြားတိုင်းကြီးများနှင့် ပြည်နယ်များတွင် (၂)သန်း(သိန်း ၂၀) နေထိုင်ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၁၂။ ဗမာဘုရင်များအုပ်စိုးချိန် ကရင်အမျိုးသားများ၏ အခြေအနေ
ပဒေသရာဇ်စနစ်ကြီး၏ အောက်ဆုံးထပ်တွင် ပိပြားနေခဲ့ရ၏၊ ကြမ်းကြုပ်ရက်စက်မှု အားလုံးကို ၀၀လင်လင်ကြီးခံစားရ၏။ ဘ၀အခြေအနေတို့မှာ ကျေးကျွန်တို့ထက်ပင် ဆိုးဝါးလှ၏။
ဗမာလူမျိုးတို့နှင့် ရှောင်ရှားနိုင်သမျှရှောင်ပြီးတော့ တောတောင်များတွင် သစ်တပ်များဝိုင်းရံ တည်ဆောက်ပြီး နေကြ၏။
ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်လာသူများကို မိစ္ဆာတွေဟု မျတ်ချကာ ပိုမိုနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရပေ၏။ ဗြိတိသျှနယ်ချဲ့သမားတို့ ဗမာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်လာသည့်အခါ ကရင်တို့သည်ဗြိတိသျှ အစိုးရကို အားကိုးအားထားပြုကာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကို အရယူလာခဲ့၏။
၁။ ကရင်အမျိုးသား သမိုင်ဆိုင်ရာသုတေသီများက ကရင်အမျိုးသားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းB.C 739 တွင် ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသည်ဟု အတည်ပြုထားသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းသုံးထောင်ခန့်က အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ ဒီရေရောက်ရာ မြစ်ဝှမ်းကိုးသွယ်တို့တွင် ဖြတ်သန်းနေထိုင်ခဲ့ကြသဖြင့် ရောင်ခြည်ကိုးဖြာနှင့် မြစ်ဝှမ်းကိုးသွယ် ကရင် အနွယ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကိုးဒီ၏သားဟူ၍လည်းကောင်း တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ တီ (၉) တီ ၁။ ဧရာဝတီ ၂။ ဟံသာဝတီ ၃။ ဓည၀တီ ၄။ သာယာဝတီ ၅။ ကန္တရ၀တီ ၆။ ဒွါရ၀တီ ၇။ ဇေယျာဝတီ ၈။ ကေတုပတီ ၉။ မြ၀တီတို့ ဖြစ်ကြသည်။
၁။ ယန်စီကျန်းမြစ်ဝှမ်း ၂။ ဟိုဝှမ်ဟိုမြစ်ဝှမ်း ၃။ စစ်ကျန်မြစ်ဝှမ်း ၄။ ကောင်းတုံမြစ်ဝှမ်း ၅။ မဲနမ်မြစ်ဝှမ်း ၆။ မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်း ၇။ စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်း ၈။ သံလွင်မြစ်ဝှမ်း ၉။ ဧရာဝတီမြစ်
၄။ ကရင်လူမျိုးများ၏ သရေတ္တေရာမပျက်မှီအချိန်ခန့်ကပင် တရွေ့ရွေ့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပြီး မြန်မာများထက် စောစွာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ၀င်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူဖြစ်ကြသည်။
(က) မွန်ဂိုလီးယားမှနှစ်ပေါင်း (၁၈၀)နေခဲ့ပြီး မွန်ဂိုလီးယားပြည်မှ ထွက်ခွါသောအချိန်သည် ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ သက္ကရာဇ် (B.C 2013) ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ အရှေ့တာကစ္စတန်သို့ ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ သက္ကရာဇ် (B.C 2017) ခုနှစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး။ ကြားကာလတွင် လမ်းခရီး (၄)နှစ် ကြာညောင်းပါသည်။
(ခ) အရှေ့တာကစ္စတန်မှ နှစ်ပေါင်း (147)နှစ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး အရှေ့တာကစ္စတန်မှ ထွက်ခွါသောအချိန်သည် ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ သက္ကရာဇ် (B.C 1864) ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ တီဗက်ပြည်သို့ (B.C 1866) ခုနှစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး။ ကြားကာလတွင် လမ်းခရီး (၂)နှစ် ကြာညောင်းပါသည်။
(ဂ) တိဗက်ပြည်မှ နှစ်ပေါင်း (476)နှစ် နေခဲ့ပြီး တိဗက်ပြည်မှထွက်ခွါသောအချိန်သည် ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C
1388)ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ ယူနန်ပြည်သို့ ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C 1385)ခုနှစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊ ကြားကာလတွင် လမ်းခရီး (၃)နှစ်ကြာညောင်းပါသည်။
(ဃ) ယူနန်ပြည်နယ်မှ နှစ်ပေါင်း (257ခုနှစ်နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယူနန်ပြည်မှထွက်ခွါသောအချိန်သည် ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C 1128)ခုနှစ်မာနိုင်ငံသို့ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C 1125)ခုနှစ်ရှိခဲ့ပြီး၊ လမ်းခရီး (3)နှစ် ကြာညောင်းပါသည်။
(င) ယူနန်ပြည်မှ နှစ်ပေါင်း (B.C 644)နှစ် နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယူနန်ပြည်မှ ထွက်ခွါသော
အချိန်သည် ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C 741)ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရစ်တော်မပေါ်ထွန်းမှီ (B.C 739) ခုနှစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး၊ ကြားကာလတွင် လမ်းခရီး (၂)နှစ် ကြာညောင်းပါသည်။
January 31 marks the 60th anniversary of one of Asia's oldest rebel movements—the Karen National Union (KNU). It isaday commemorated by Karen people all around the world.
A Karen soldier at the frontline. (Photo: Steve Sandford)
When the KNU's founding father, Saw Ba U Gyi, established the rebel movement in 1949, he unveiled his "Four Principles" of resistance: "There shall be no surrender; The recognition of the Karen State must be completed; We shall retain our arms; and We shall decide our own political destiny."
Soldiers of the Karen National Liberation Army, the oldest rebel group, stand at parade arms atabase near the Thai-Burmese border.
"We have to carry on the unfinished duty for our people. If we give up, it is as if we were betraying our comrades and our leaders who have died for us," said Brig-Gen Johnny.
"Our enemy [the Burmese military regime] is trying to divide us every day. We have to be united and always be careful," he said.
Meanwhile, the DKBA has boasted that its forces will overrun the KNU's military wing, the KNLA, by 2010.
However, the KNU leadership, as always, remains resolute.
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://sawlinux.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.